Shabakada ugu fiican ee Google Sawirlayda - Khabiirka Cilmiga ah
Sida Gitrik, GitLab, iyo BitBucket, GitHub waa nidaam la xakameynayo oo si fiican loo fahmayo
taas oo keydinta macluumaadkaaga ku jira foom la aqrali karo oo la isku xoqin karo. GitHub waxay bixisaa laba nooc oo ah qorshooyin: miisaaniyad bilaash ah iyo mushaarka lagu bixiyo. Waxay sheegtay in ay haystaan ​​in ka badan 15 milyan oo qof oo isticmaala firfircoon iyo ku dhawaad ​​56 milyan oo mawaadiniin ah oo adduunka ah.
Sababaha ugu muhiimsan ee loo isticmaalo GitHub:
1. Ku biirinta mashaariicdaada furan:
GitHub wuxuu kuugu deeqayaa mashaariicda aad u furan ee aad ka heleyso oo aad ku kaydiso waqti badan iyo tamar. Haddii mashruucaaga ka mid yahay wikis ama soojeedin raadiye, waxaad dooran kartaa GitHub oo shaqadana si habboon u shaqee. Symfony, Django, iyo Ruby on Rails waxay adeegaan adeeggan si ay u horumariyaan mashaariicda cusub iyo tabarucaadka shaqaalaha fog.
Sida GitLab iyo BitBucket, GitHub Enterprise waxaa loogu talagalay shirkado waaweyn. Waxay ka caawisaa barnaamijyada iyo khabiirada martigelinta qashinka ka dambeeya fir fircoon ganacsi.
Markdown waa ficil ku saabsan qorista dukumentiyo leh tifaftire qoraal gaar ah. GitHub wuxuu awood u leexin karaa wikis, faallooyin iyo soo-saarayaasha raad-raacayaasha oo markaa si fudud u shaqeynaya. Haddii si kale loo dhigo, macneheedu waa waxaad ku qori kartaa dukumiinti xirfad leh adeeggan. Haddii aadan haysanin barnaamijka ku filan ama xirfadaha codka, weli waxaad u sii wadi kartaa GitHub farsamooyinka qoraalka.
4. Ku habboon shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah:
GitHub wuxuu leeyahay dukumintiyo aad u fiican. Waxay ku haboon tahay shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Qeybta GitHub, waxaad ka heli kartaa maqaalo waxtar leh iyo mawduucyo xiiso leh. Ma rabtaa in aad ogaato sida loo abuuro shaqo-socodka Git? Waxaad gali kartaa boggeeda si aad u ogaato wax kasta oo arrintan ku saabsan. GitHub wuxuu bilawday dhowr bilood ka hor. Iyada oo Gist, waxaad u rogi kartaa faylasha kala duwan ee moodada Git ku habboon. Intaa waxaa dheer, Gist wuxuu kuu fududeynayaa inaad wadaagto oo aad raadiso isbeddelada faylashaada iyo qoraallada qaabeynta. Gistu waxay ku dhisan tahay fikradda fudud ee qariidada qorrax ka dibna lagu daraa qashinka koodhka iyo sirta SSL oo loogu talagalay mashiinka gaarka loo leeyahay.
5. AdeegHadda suuqa GitHub:
GitHub wuxuu sidoo kale adeegyo ka siiyaa dadka adeegsada. Adeegyada ugu muhiimsan waxaa lagu sheegay hoosta:
• Travis CI - Waxay si buuxda gacanta kuugu haysaa bey'ada GitHub waxaana loo hayaa kooxo turjubaan u ah luqadaha kala duwan.
• GitLocalize - GitLocalize waxaad ku dhejin kartaa galkaaga GitHub waxayna kaa caawineysaa inaad diiwaangeliso shaqadaada Source .